Njem mbata mbata na-alaghachi nzọụkwụ dị oke mkpa n'ụzọ ziri ezi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Njem mbata mbata na-alaghachi nzọụkwụ dị oke mkpa n'ụzọ ziri ezi
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Njem mbata mbata na-eweghachi nzọụkwụ dị oke mkpa n'ụzọ ziri ezi.
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ nke mmachi, Mọnde na-amalite n'ụzọ siri ike nloghachi nke njem mba ụwa, mgbe ezinụlọ na ndị enyi kewapụrụ ogologo oge nwere ike ijikọ n'enweghị nsogbu, ndị njem nwere ike ịchọpụta obodo a dị ịtụnanya, US na-enwekwa ike ịbanye na obodo ụwa.
Industrylọ ọrụ njem US ga-anabata ndị ọbịa mba ụwa niile gbara ọgwụ mgbochi laghachi na United States ka ọnwa iri na itoolu nke mmachi oke metụtara ọrịa malitere na Nọvemba 19.
Ịmepeghachi 'nzọụkwụ dị mkpa n'ụzọ ziri ezi,' n'agbanyeghị na akụrụngwa gọọmenti etiti agbakwunyere chọrọ iji leba anya n'azụ nhazi visa.
Na 2019, njem mbata mba ofesi rụpụtara $239 ijeri ego mbupụ maka akụ na ụba US wee kwado ọrụ nde America 1.2 ozugbo.
N'ọdụ ụgbọ mmiri ikuku, ala na oke osimiri, yana gafee ebe mba niile, ụlọ ọrụ njem US ga-anabata ndị ọbịa mba ụwa niile gbara ọgwụ mgbochi azụ na mba ahụ. United States mgbe ọnwa 19 nke mmachi oke metụtara ọrịa na-amalite na Mọnde (November 8), ihe dị ịrịba ama a na-echere ogologo oge nke na-egosi iwughachi njem mbata mba ofesi.
Omume a bụ isi nzọụkwụ mbụ na mgbake nke ahịa njem mba ụwa na-enye nnukwu ego. Na 2019, njem mbata mba ofesi rụpụtara $239 ijeri ego mbupụ maka akụ na ụba US wee kwado ọrụ nde America 1.2 ozugbo.
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ nke mmachi, Mọnde na-amalite n'ụzọ siri ike nloghachi nke njem mba ụwa, mgbe ezinụlọ na ndị enyi kewapụrụ ogologo oge nwere ike ijikọ n'enweghị nsogbu, ndị njem nwere ike ịchọpụta obodo a dị ịtụnanya, na US nwere ike ijikọ na obodo zuru ụwa ọnụ. Ọ bụ ụbọchị ncheta maka ndị njem, maka obodo na azụmaahịa na-adabere na nleta mba ụwa, yana maka akụnụba US n'ozuzu ya.
Mba ndị amachibidoro njem njem - nke gụnyere United Kingdom, Ireland, mba 26 Schengen Mpaghara, South Africa, Iran, Brazil, India na China - nwere naanị 17% nke mba niile n'ụwa niile mana ha ruru 53% nke esenidụt niile. ọbịa na United States na 2019.
Ókèala ala ahụ na Canada na Mexico — ahịa abụọ kacha abanye na US — mechirikwa.
November 14, 2021 na 06: 51
Ọ bụ ezie na imepe ókèala anyị bụ nzọụkwụ dị oke mkpa n'ụzọ ziri ezi, a ka nwere ọtụtụ ọrụ iji hụ na mgbake maka mba ụwa. Ị ga-aga n'ihu na-ezere njem na-adịghị mkpa na ebe niile. N'agbanyeghị ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa gị: mara maka ọrụ COVID-19.